အဖေ့အိမ် – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
အဖေ့အိမ် – လှိုင်သာယာ&Hack
Carlos ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။’ ဖခင်ထံမှ ဒုက္ခရောက်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ခရီးဆက်ခဲ့သည်။, သူ့အဖေကို သူ့အိမ်ဟောင်းကို ပြန်ပြီး ကယ်တင်ဖို့ တောင်းဆိုတယ်။.
သူသည် အိမ်ကို ဆက်၍ စူးစမ်းသည်။, ကားလို့စ်သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း 'ချစ်စရာကောင်းသော' အများအပြားကို ကြုံတွေ့ရသည်။’ ဘီလူးများ. သူ့ရှေ့မှာ ပဟေဋ္ဌိတွေကို အဖြေရှာရင်းနဲ့, အမှန်တရားနဲ့ ပိုနီးစပ်တယ်။…
Freud က ပြောဖူးတယ်။: “အချစ်နဲ့အလုပ်, အလုပ်နှင့်အချစ်…ဒါပဲရှိတာ။”
ဒါပေမယ့် ဘာဝေဒနာလဲ။, ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုန်းကန်မှုများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကြားတွင် မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်ရသည့်အခါ?
ဒီလိုအရှုပ်အထွေးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။, ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချစ်ဆုံးသူများကို နာကျင်စေဖွယ်ရှိသည်။.
အမှောင်ထဲမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဘေးကင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်။.
Dad's Monster House နဲ့, ဒီလို ကြည်နူးစရာ အမှတ်တရမျိုးတွေကို ရွေးနုတ်ခြင်းမှာ အခွင့်အရေးပေးချင်ပါတယ်။.
ငါ အဲဒါကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆီ အပ်နှံတယ်။, ငယ်ဘဝအိပ်မက်တွေဆီကို;
အထဲမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး အဖြေတွေကို တွေ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။, သင့်အချစ်အတွက်ဖြစ်ပါစေ။, သိပ္ပံအတွက်, သို့မဟုတ် အိပ်မက်များ.
ညနက်နက်မှာ ရုတ်တရက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကြောင့် သင် တစ်နှစ်အတော်ကြာ မရောက်ဖူးတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ပြန်သွားပါပြီ။. ပဟေဋ္ဌိတစ်ခုပြီးတစ်ခု အဖြေထုတ်ရပါမည်။: အမှတ်တရတွေနဲ့ ရောယှက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကနေ သဲလွန်စတွေရှာပြီး မင်းအဖေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို အောက်ခြေအထိ ရောက်အောင်သွားပါ။.
ဤဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းကို ရွေးရန် သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ရန် ရွေးချယ်မှုမှာ သင့်လက်ထဲတွင်ရှိသည်။.
တောက်ပပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှိတဲ့ အရောင်တွေကို သွားမယ့်အစား, အဖြူအမည်းအနုပညာစတိုင်ကို ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။. အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ နောက်ခံစကားပြောသည်။, ပဟေဠိများစွာ, နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အသံဒီဇိုင်းများသည် ကစားသမားအနေဖြင့် ဇာတ်ကောင်၏ခံစားချက်များ အတက်အကျများကို အမှန်တကယ်ခံစားရသည့် နစ်မြုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။. နောက်ထပ်အရာများကို စုဆောင်းပြီးပါက ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပါ။…
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Dads, House, Monster
← ဉာဏ်စမ်း Crack Explorer – လှိုင်သာယာ&Hack အနိုင်ရရန် Liner-Line တစ်ခု – လှိုင်သာယာ&Hack →